Adora etc. October 22, 2013 at 5:36 PM
မမသက်ကြီး ပျောက်နေတာ။ ခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်
ဆွေလေးမွန် October 22, 2013 at 5:43 PM
စန်းစန်းတင့် ဖတ်နေရင်း ဖတ်နေရင်းနဲ့ တိတွားဘီ..
ဒါပဲ ..fb မှာ ဘယ်သူလဲဆိုပြောပြလိုက်ရမလား ပြော..
မင်းဒင် October 22, 2013 at 8:35 PM
Anonymous October 23, 2013 at 12:05 AM
San Htun October 23, 2013 at 8:33 AM
ဘူဖေးသွားစားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ခန်းထဲ ရောက်ရင် အဲဒီအစားအသောက်အနံ့ တွေ ရတာ ခေါင်းကိုက်လို ရှုဆေးရှုရဖူးတယ်...း)
ပန်းခရမ်းပြာ October 23, 2013 at 5:05 PM
စဉ်းစားလိုက်ရတာ. စန်းစန်းတင့် လှစွာသော နှာခေါင်း ကို အခြေခံ၍ အဖြေထုတ်ပါတယ်။
ှစန်းစန်းတင့် = Sensitive
Anonymous October 25, 2013 at 11:03 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ နဲနဲတော့ စန်းစန်းတင့်သူ ဖြစ်နေလို့ သဘောကျမိပါရဲ့။ ဒညင်းသီး၊ မျှစ်ချဉ်၊ အမွှေးတိုင်၊ ရွှေပြည်နန်း တို့လို သိပ်ပြင်းတဲ့အနံ့တွေဆို လုံးလုံးမခံနိုင်တာ မို့ သူများတွေကိုလဲအားနာရ၊ ကိုယ်လဲဒုက္ခရောက်ရနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ကြိုက်လို့ ဖဘပေါ် ရှယ်လိုက်ပါတယ်နော်။
Hmoo October 26, 2013 at 10:11 AM
Anonymous October 27, 2013 at 1:13 AM
ဆိုက်ကို နည်းနည်းဝင်နေသူ ..
ကျမ စန်းစန်းတင့်တာက ချိုင်းချွေးနံ့ ရယ် စီးကရက် နံ့ရယ် သူများ အိမ်သာသွားပြီး အမွှေး သုံး မသွားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ